Imbwa Inobereka Info: Ko Vafudzi veGoridhe imbwa dzakanaka here? - Inobereka
Imbwa imhuka dzakasarudzika dzinochengetedza nzvimbo muhupenyu hwedu. Dzimwe imbwa dzakanyatsonaka, uye imwe yadzo ndeyeMufudzi weGoridhe.
Muchinjikwa pakati peGolden Retriever neGerman Mufudzi, mbiri dzembwa dzinozivikanwa muUS, musanganiswa wavo wakanaka imhuka yakanaka uye shamwari.
Kana izvi zvikaita kunge mwana wako, ramba uchiverenga kuti uzive iyi fido zvirinani.
Sei Mufudzi weGoridhe akasikwa?
Chii chinonzi Goridhe Mufudzi chinotaridzika?
Hunhu hunodakadza hweGoridhe Vafudzi
Kuchengeta yako Goridhe Mufudzi
Vafudzi veGoridhe vane hutano here?
Yakawanda sei iyo Goridhe Mufudzi wembwanana?
Zvibereko zvichienzaniswa neGolden Shepherd
Mutongo: Vafudzi veGoridhe ishamwari dzakanaka
Vavariro yevaberekesi yaive yeku gadzira mhando yakasanganiswa ine mashoma matambudziko ehutano uchienzaniswa nevabereki varo vakasununguka uye kuva iyo wekupedzisira wachi uye yemhuri chipfuwo .
Hazvizivikanwe kuti inguva yakareba sei iyo yeGerman Shepherd Golden Retriever musanganiswa anga aripo, asi vamwe vanoti vanogona kunge vari chikamu chenyika ye canine kubva kuma1980 - pakayambuka purebreds yakatanga. Ivo chaizvo vakatanga kukoshesa muna 2009, zvakadaro.
Kunyangwe kana veGolden Shepherd vasingazivikanwe neAmerican Kennel Club nekuti imbwa yekugadzira, mamwe masangano anovagamuchira uye anotambira pooch iyi yekunyoreswa. Iko kune Mugadziri Wekubereka Rejista (DRA), American Canine Mbeu dzakauchikwa Club (ACHC), uye International Dhizaini Canine Registry (IDCR).
Ngatisanganei nevabereki veiyi imbwa kuti tinzwisise zvimwe zvavachaita maererano nechitarisiko nehunhu.
Mufudzi weGerman akashinga
Inozivikanwa se Yechipiri inonyanya kufarirwa mhando muUS uye Imbwa yepamutemo yeGerman , Vafudzi veGerman (GSD) anonamatwa nehunhu hwavo hwekushanda nesimba, hunhu hwakapinza, nehungwaru.
Ivo pakutanga vaishandiswa kufudza kuGermany, uye varidzi vakaona kuti imbwa idzi 'hunhu hwekushanda hwakakosha. Nhasi, ivo havasi ivo chete vakakurumbira mumapurazi nemaruva, asi ivo vanowanikwa senge sarudzo yepamusoro seshamwari yemapurisa nemauto. Kuva ne kuruma simba re238 PSI zvirokwazvo inobatsira nebasa uye kutora pasi vakaipa vakomana.
MaGSD ari canines hombe nehurefu hunotangira pamasendimita makumi maviri nemaviri kusvika makumi matanhatu neshanu (56 kusvika 66 cm) uye huremu hwemakirogiramu 65 kusvika ku90 (29 kusvika 41 kg).
Uye nekushandiswa kwemuviri wavo unonamira uye wakanyatsosimba, unogona kutora mutero pavari uye unongowana kunakidzwa nehupenyu hwemakore manomwe kusvika gumi.
Kuzivikanwa kweGerman Mufudzi werudzi kungave kwakaburitsa pakupera kwema1800, asi ivo vachiri kuramba vachipinda mukati memoyo yakawanda yevanoda imbwa nekuda kwehunhu hwavo hwekutsanangura. Hazvishamise kuti ndeimwe yesarudzo dzaunofarira paunenge uchigadzira mabheji, saGolden Shepherd, ChiGerman Husky , uye akanaka Corman Mufudzi .
Iyo inoshamwaridzika yeGold Retriever
Kutevera iyo GSD kana zvasvika pakuzivikanwa, kunyanya nemhuri, ndiko kunodiwa Goridhe Retriever nenguo yegoridhe inopenya.
Iyi imbwa yepfuti yakabva kuScotland yakaverengerwa kutora mutambo (saka zita racho) senge madhadha, shiri dzemvura, uye shiri dzemupland. Varidzi verudzi urwu vangabvuma kuti chero chiitiko chine chekuita nemvura inyaya yekunakidzwa yeiyi imbwa.
Nayo kutamba uye kufara nzira yehupenyu, Goldens inoita senge pakati nepakati canines yakachengetedza hunhu hwayo hwembwanana, uye vanozviita. Asi kune avo vasingazive, iyi pooch ine rudo uye yakangwara.
Havazi ivo chete vanodzosa vanokwikwidza mukuteerera uye kuenzanisa zviitiko, asi zvakare vanovimbika kana zvasvika pakuonekwa, kuvhima, kutsvaga & kununura, pamwe nerubatsiro uye imbwa dzinotungamira.
Goldens ari emitambo fidos anorema 55 kusvika 75 pounds (25 kusvika 34 kg) uye anomira anenge 21.5 kusvika 24 inches (55 kusvika 61 cm).
Zvichienzaniswa neVafudzi veGerman, Golden Retrievers vanorarama kwenguva yakareba - makore angangoita gumi kusvika gumi nemaviri.
Iwe unofanirwa kuziva kuti zvakaoma kufanotaura kuti vana vemarudzi maviri akasiyana vachataridzika sei, uye zvinowanzoitika kuti chitarisiko chavo sembwanana chinozochinja kana vanyatsokura, kunyangwe paine purebreds. Asi isu tinogona kugadzira generalizations zvichibva pahunhu hwevabereki vavo.
Iyo yeGerman Mufudzi weGolden Retriever musanganiswa anogona kuve neanomhanya kana akaonda kuvaka, ane musoro wakakura uye wakafara musoro. Nzeve dzavo hombe dzinogona kuve dzakatwasuka kana floppy, uye maziso avo ane yakadzika brown hue ine inoratidzira kana yakangwara maziso. Ipapo muswe unenge wakareba, wakakora, uye wakakombama zvishoma.
Kana zvasvika kune iyi dhizaina imbwa jasi, ivo vanowanzo vane dense fur iyo inogona kuva yepakati kana yakareba. Asi sezvo vari yakapetwa kaviri imbwa, tinogona kuva nechokwadi chekuti hadzikurudzirwe kune vanorwara nehegi.
Vamwe vanogona kutova nemapapiro pane yavo yepasi pasi, makumbo, uye muswe. Vafudzi veGoridhe vanogona kuoneka mune makuru mavara senge dema, tani, kirimu, bhuruu, uye tsvuku, asi vanogona kuve musanganiswa wemumvuri uyu, zvakare.
Saizi: Yakakura sei iyo Goridhe Mufudzi inowana?
Tinogona kutarisira kuti iyi yemasanganiswa ive a pakati- kusvika imbwa hombe nehurefu hunotangira pa 20 kusvika 27 inches (51 kusvika 69 cm) uye inogona kuyera 60 kusvika 95 mapaundi (27 kusvika 43 kg). Nechevakadzi, vakadzi vanowanzo kuve vadiki pane varume.
Kana iwe uchinetseka kuti iyo Golden Shepherd mbwanana inosvika pakukura kwayo kwevakuru, kazhinji pavanenge vari kutenderera 2 kusvika 2 ½ makore emakore.
Chimwe chinonakidza chokwadi nezve iyi imbwa dhizaini ndeyekuti ivo ita zvakanaka mumafurati ! Kunyangwe pahukuru hwavo, iyo yeGolden Mufudzi musanganiswa inogona kuchinjika kune chero rudzi rweimba, chero bedzi yavo yekurovedza zvinodiwa yasangana.
Kuti upindure mubvunzo wedu wekutanga nezve ino yambuka, maGolden vafudzi vane Hwakanaka hunhu . Kungofanana nevabereki varo, vane rudo uye vakangwara. Iyo inopenya canine inogona kudzidziswa zviri nyore uye inogona kuve imwe yeakanakisa imbwa dzinorinda uye imbwa dzinotarisa.
Ramba uchifunga kuti mwana akasanganiswa akasangana anogona kugara nhaka chero ehunhu hwevabereki vavo . Dzimwe nguva, vanogona kuita semubereki mumwe pamusoro peumwe. Chero nzira, iyi fido ine zvakawanda zvakanaka maitiro.
Ivo vanogona zvakare kuve vari nyore-kuenda uye vaizogara vachida kufadza mhuri yavo nehungwaru hwavo, izvo zvinoita kuti ichi chakayambuka chizivikanwe nevana.
Chenjera, zvakadaro. Kunyangwe kana vakawirirana nevana vako vadiki, iyi pooch yakakura kwazvo, uye kana ikawana simba rekuruma reGerman Mufudzi, unofanirwa kungwarira. Zvirinani kuve wakachengeteka pane urombo.
Hazvireve kuti nguva yekutamba haigone kunakidza. Iyo yakatove nzira yakanakisa yekubatana nezvipfuyo zvedu. Hazvina basa kuti nderipi basa, Mutungamiriri weGoridhe angada kuve chikamu charo. Vaisatombozvikoshesa kana ukavasiya vega kwenguva yakareba nekuti ivo unogona kuwana kupatsanuka kunetseka .
Kupisa simba ravo kwaizobatsirawo kubvisa chero dambudziko rehunhu.
Une dzimwe mhuka dzinovaraidza kumba here? Shiri, hamster inokakama, kana katsi? Ive nekuchenjerera kana iwe uchifunga kuwana iyo yeGolden Retriever & yeGerman Mufudzi musanganiswa wega. Tinofanira kufunga nezvazvo vane vabereki vane nhoroondo yekuvhima . Kana zvisiri, unogona kutarisana nekutandanisa kwakawanda.
Kana iwe uchida rudzi urwu seye canine shamwari, tarisa pamasocialization uye nekutanga kudzidziswa kuitira kuti vazive maitiro ekuita zvakanaka kana paine vamwe vanhu uye mhuka dzinovaraidza dzakatenderedza.
Ingo tarisa iyi vhidhiyo yeyeyeye uye anotamba yeGold Shepherd puppy:
Kana iwe wakambove uine Goridhe Retriever kana weGerman Mufudzi, kubatanidza izvi zviviri kwaizogadzira iyo yakasanganiswa iyo ISIYO hypoallergenic. Saka gadzirira kugadzirira mwaka! Iwe unofanirwa kukwesha bvudzi rako rembwa zuva rega rega uye uve neyako vhoriyamu yakagadzirira.
Asi kana iyo yeGolden Shepherd musanganiswa usiri kufuridza jasi rayo zvakanyanya, unogona kukwesha kana kukwesha jasi rayo kaviri kana katatu pavhiki .
Iwe unofanirwa zvakare kuyeuka kuti mbiri-dzakaputirwa imbwa dzinobereka haifaniri kuveurwa . Huru yavo inoitirwa kuchengetedza fidos kubva kune yakanyanya mamiriro ekunze senge chando, mvura, uye kushambira mumvura inotonhora. Izvo zvakare zvinopesana netsvina. Izvi zvinoreva kuti iwe unofanirwa chete kupa pooch yako a bhati pazvinenge zvichidiwa .
Tarisa vhidhiyo iyi yehunyanzvi yekushambadzira maitiro ekushongedza imbwa dzakaputirwa-mbiri:
Zvimwe pane izvo, ita cheki vhiki nevhiki yako yeGolden Retriever yeGerman Mufudzi musanganiswa nzeve dzemarara uye cheka nzara dzake kamwe kana kaviri pamwedzi.
Uye sezvo urwu rwakavhenganiswa rwunowanzoita tartar kuvaka-up, ita tsika yekutsvaira mazino mazuva ese.
Nezvekudya kwayo, rangarira mutemo wekuti mhando uye huwandu hwechikafu chatinodyisa imbwa yedu chinofanira kuva zvichibva nezera rake, saizi, chikamu chezviitiko kana metabolism, uye hutano . Saka kune iyi canine, sarudza yakaoma mabhuru akagadzirwa kuitira anoshanda zvikuru uye makuru mabhuru.
Iyi imbwa dhizaini inokombamira kuwana huremu, saka ita shuwa yekukamura makapu maviri nehafu Chikafu chembwa muzvikafu zviviri. Uye usasiya chikafu kunze kana kusununguka-fudza chipfuwo chako. Namatira kune yenguva dzose yekudya chirongwa uye uve nechokwadi chekudzora kubata.
Kuti ubate nemuromo wayo quirk, chinja kubva kunodya tambo kuva mapfupa akasimba uye kutsenga matoyi. Ichachengetedza shamwari yako yemvere kubva kutsenga shangu dzaunofarira uye fenicha ine mutengo.
Ngatifambirei mberi kunorovedza muviri! Kuenda kune ino inoshanda crossbreed zvinoreva kuti unofanirwa kushandisa kanenge awa rimwe zuva nezuva kuona kuti anowana kukurudzira kwepanyama uye kwepfungwa kwaanoda. Ita kuti zvinakidze nekutora yako yeGoridhe Mufudzi pane zviitiko zvinonakidza senge kukwikwidza.
Usave wakanyanya kufara, zvakadaro. Kana iwe ukawana wechiGerman Mufudzi weGoridhe Retriever sanganisa mbwanana, chengeta nguva yekutamba, senge kumhanya kana kutora, pahuswa. Majoini avo haana kunyatsoumbwa kusvika vasvitsa makore maviri ekuberekwa. Saka edza kugara kure nenzvimbo dzakaomarara, sepavhu, kuti udzivise matambudziko ehutano hwepakutanga.
Vafudzi veGoridhe kazhinji vane hutano, asi vanogona kutora nhaka yezvirwere kana kukudziridza zvimwe zvinonetsa zvehutano munzira.
Zvimwe zvezvirwere zvaunofanirwa kutarisa ndezviputi uye gokora dysplasia, atopic dermatitis, uye hyperthyroidism.
Kana iwe uchifunga kuti izvo zvakashata, vanogona zvakare kuve nekenza, pfari, Exocrine Pancreatic Kusakwana (EPI), Von Willebrand's Disease, aortic stenosis, osteoarthritis, uye degenerative myelopathy.
Iwe unogona kunge uchishamisika kuti izvi zvingave sei kana mazambuko ane simba rehybrid? Vamwe vanhu vanobvumirana nazvo kusanganiswa kune hutano pane hutsanana , asi hazvireve kuti hatifanire kungwarira.
Kubva pakuberekesa kusvika padanho rekutarisira mbwanana, zvese zvinogona kukanganisa hutano hweiyo imbwa chaiyo.
Tichiri kufanira kutora matanho, kuchengetedza zvakanaka mhuka dzinovaraidza, kupa chikafu chakaringana, uye kugara uchiongororwa nemhuka, izvo zvinogona kuita mutsauko. Ita izvi, uye yako yeGolden Retriever & yeGerman Mufudzi muchinjikwa anogona kuva nehupenyu hwe Makore gumi kusvika gumi nemana .
Goridhe Mufudzi vana vanodhura chero kupi kubva $ 500 kusvika $ 1500 . Mutengo wemuputi unokanganiswa nezvinhu zvakasiyana. Mimwe yeiyo inzvimbo yemuberekesi, kuteura ropa revabereki, kufarirwa kwekennel, uye kukura kwemarara.
Kazhinji, kuyambuka Mufudzi wechiGerman neGoridhe Retriever kunogona kuburitsa marara e 6 kusvika kugumi vana . Saka kana mumwe muberekesi aine vatengi vakawanda uye paine chete kana maviri embudzi aripo, gadzirira chikwama chako kuti iwe ugone kutora yako yemasanganiswa furball ipapo ipapo.
Asi usati wabhadharira chero mbwanana, ita shuwa kuti uri kubata nemuberekesi ane mutoro.
Tarisa vatsvaki vanoisa pamberi pehutano hwechibereko chayo uye vana vayo. Ivo vaizobvunzurudza mutengi wese anofarira kuti ave nechokwadi chekuti madiki furballs anopedzisira ave nemuridzi chaiye. Iva wakagadzirira kupindura iyo mibvunzo, uye uzive chekubvunza , naizvo.
Kuita tsvagiridzo yako ndiwo mutengo mudiki wekubhadhara kuti uwane Goridhe Mufudzi wako ane hutano.
Kuti uve nechokwadi chekuti uri kuwana mwana wembwa ane hutano, usakanganwa kubvunza kana iwe uchikwanisa kuona zvinyorwa zvekurapa zvemarudzi emubereki. Kana marara akabayiwa jekiseni, kumbira kana iwe uchikwanisa kutarisa izvo, zvakare.
Iwe unogona zvakare kutsvaga vamwe varidzi veGoridhe Mufudzi kana a pasocial media group kuti unzwisise kuzvipira kwaunoda kuti upe iyi imbwa dhizaina hupenyu hwakanakisa.
Vafudzi veGoridhe Mufudzi & kennels
Kana iwe wagadzirira kutarisa dzimwe diki dzeGolden Shepherd dziri kutengeswa online, isu takawana mamwe mawebhusaiti ane imbwa dzinowanikwa iwe!
Goridhe Mufudzi Pup (Central Virginia)
Kune zvakare misika inokodzera kuongorora, senge Greenfield Puppies , Lancaster Puppies , uye Keystone Puppies .
Zvakadii nezveGoridhe Mufudzi wekutora?
Kufunga kwakanaka! Wanga uchiziva here kuti yakawanda yemuchinjikwa inopedzisira yagara mumatumba? Panogona kuve nezvakawanda zvikonzero kuseri kwayo, asi chimwe chazvo imhaka yekuti varidzi vayo vekare havana kugadzirira kuti vana vakanaka vakakura sei kuva - kudurura, kukura kudarika zvaitarisirwa, uye zvimwe zvakawanda.
Ndosaka tichikurudzira kuti utore, ununure, kana kukurudzira Goridhe Mufudzi, kana chero imwe imbwa. Mumwe nemumwe wavo akakodzera kudiwa uye kuva nemhuri, uye ivo vaingoda chete kuda munhu wavo.
Vazhinji veGolden Retriever uye veGerman vafudzi vemasangano kana mapoka anewo mhando dzakasiyana dzakada imba yekusingaperi. Ivo havangove vasina purebreds uye eGolden Shepherds, kune mamwezve ma mixes anogona kuba moyo wako!
Mufudzi wechiGerman Kununura & Kugamuchirwa (Raleigh, NC)
Sedona Mufudzi Sanctuary (Millburn, NJ)
Nokukurumidza Goridhe Retriever Kununura (Oklahoma Guta, OK)
Delaware Valley Goridhe Retriever Kununura (Reinholds, PA)
Zvipfuwo zviri munzvimbo dzekuvanda zvinouya mumazera ese uye hukuru. Kana iwe usiri kuda imbwanana nekuti, zvinobvumwa, iwo ibasa rakawanda uye inoda nguva yakawanda sezvavanoita kushivirira, ipapo kutora mwana wekare, kana kunyange mukuru canine, isarudzo huru. Mushure mezvose, mazhinji acho akatodzidziswa dzimba.
Iko kune kumwe kusanganisa uko uko kunogona kuve yakasarudzika sarudzo kana iwe uchinge uchinzwa kuti iyo Goridhe Mufudzi harisi iro rakakodzera rudzi kwauri.
Heano dzimwe imbwa dzekugadzira idzo iwe dzaunofanirwa kufunga kana iyo Goridhe Mufudzi akakwanisa kuwana chako kufarira.
Mufudzi weAustralia weAustralia
Goridhe Aussie ( mabviro )
Iyo inozivikanwawo se Aussie Retriever , uyu musanganiswa muchinjikwa pakati pe Mufudzi weAustralia uye Goridhe Retriever.
Aussie Goridhe Retrievers vane musoro wakafara, nzeve dzakarembera, maziso anoratidza, uye mhino nhema. Iyi yepakati- kune imbwa hombe-saizi inogona kuyera Makirogiramu makumi matatu kusvika makumi matanhatu (14 kusvika 27 kg) uye iine hurefu hwe 19 kusvika 23 inches (48 kusvika 58 cm). Vamwe vanoti vanogona kusvika pakukwirira kwemasendimita makumi matatu nemasere (76 cm).
Ivo zvakare havasi hypoallergenic uye vanofungidzirwa zvine mwero mashedhi . Unogona kuvawana mukubatanidzwa kwegoridhe, dema, chena, kana shava. Dzimwe dzinogona kuve dzakasanganiswa, dzakaonekwa, uye dzine mavara mavara. Rudzi urwu rwakavhenganiswa runewo nejasi risina mvura rakapetwa kaviri uye rakamonereka.
Iwe unogona kutarisira kuti fido iyi ibudirire mumhando dzakasiyana dzemabasa, kunyanya mukufudza! Ivo vanonakidzwa nekupedza nguva nevaridzi vavo uye nekuita basa. Kunyangwe, inogona kuve nyaya kune avo vane zvimwe zvipfuyo nekuti iyi imbwa dhizaini inogona kuve inobata zvinhu zvavo nevanhu vavanofarira.
Zvimwe pane izvo, Golden Australia Vafudzi vakavimbika, vane hushamwari, vakakura nevana, uye vanogona kurarama kusvika pamakore gumi nemashanu.
Iyo yakachena GSD nemisanganiswa yayo, pamwe nedzimwe imbwa dzinofudza, dzinowanzo fananidzwa neiyi inokwezva King Mufudzi .
Yakagadzirwa munguva yekutanga '90s kubva kuEuropean neAmerican vafudzi veGerman, Alaskan Malamutes, uye Great Pyrenees, iri hofori rakagadzirwa nemaAmerican anonzi David Turkheimer naShelley Watts-Cross.
Ivo vaida kugadzira iyo yakareba-ine vhudzi King Mufudzi, asi kubereka kwakapawo iyi imbwa dhizaini yakawedzera misiyano yemageneti kana mashoma mashoma majini.
King Vafudzi vanogona kugovana mashoma mashoma maitiro uye hunhu nemaGSD, asi ivo vari yakakwasharara, yakasungwa musumbu, uye yakasimba . Muchokwadi, ivo ndivo vakakura mukirasi yemufudzi. Ivo vane kukwirira kwe 27 kusvika 29 inches (69 kusvika 74 cm) uye kuyera 90 kusvika ku150 mapaundi (41 kusvika 68 kg).
Nezviyero izvi, usatombofunga nezvekuunza iyi hombe pooch mukamuri, furati, kana chero imba diki. Vanoda nzvimbo yakawanda, saka imba ine kumashure kuseri kukuru, purazi, kana purazi, inogona kukodzera.
Nezvejasi ravo, vane mhando mbiri - dzakatwasuka uye dzakakora, kozoita dzewavy uye dzakareba-bvudzi.
Iyo King Mufudzi inogona kuuya nerima uye chena mavara uye kunyangwe tan nemamwe maratidziro evatema uye eruvara mamaki. Vamwe vanogona kuve nehuswa hwemvere dzesirivheri nemazano evatema.
Panyaya yekuzvibata, vane hungwaru hwakanyanya, vakavimbika, vanoshanda nesimba, uye vane rudo. Pasinei nehukuru hwavo uye hunhu hunofadza, ivo vari zvinyoro nyoro nevana . Saka ita zvakanyanya zvehupenyu hwavo hunotarisirwa hwemakore gumi nerimwe zvakanyanya kana iwe ukafunga kutora mambo wechipfuwo.
Goridhe Retriever uye muchinjikwa weGerman Mufudzi anogona kutariswa seakanaka canini kune vese novice uye vane ruzivo varidzi. Musanganiswa wechitarisiko chavo chinokatyamadza, ungwaru, kuzvipira, uye hunhu hwakanaka hunovaita ivo rudzi runonakidza kwazvo .
Panogona kuve nezvakawanda zvinhu zvekufunga nezvazvo , senge kuve imbwa hombe, iyo huwandu hwechikafu chaunogona kudya zuva nezuva , uye simba rayo rakakwira.
Iyo nguva yaunofanirwa kushandisa neyako furry shamwari ndeimwe huru kufunga, sekutsvaga mumwe munhu wekumuchengeta kana iwe usipo.
Kana iwe uri muridzi ane ruzivo uyo arikutsvaga hombe pooch izvo akangwara kwazvo uye anoda kuenda kumhanya kana kutora nzendo refu, Goridhe Mufudzi achanakidzwa nazvo! Kana iwe uchida imbwa diki, dzakaderera-dzinochengetedza imbwa dzinozofara kugara pasofa kweakawanda ezuva, ungangoda kufunga imwe sarudzo, senge zvidiki zvinosanganiswa zvePoodle senge Yorkie Poo .
Uye usakanganwa, kana iwe uri weergisi kune imbwa, rudzi urwu rune huta hwakawanda uye sheds gore rese . Dudziro: ungangotanga kunyemwerera uchingotarisa pamufananidzo weputi uyu.
Kudzikama-huchenjeri, chero mudiwa wembwa aisazowana chero chichemo pamusoro peiyo hybrid. Ichowo hukuru hwakakwana kuva cuddle buddy.
Tinoda kunzwa nyaya dzenyu (pun yakanangwa), pfungwa, uye zviitiko maererano neGolden Shepherd. Goverana naro nevamwe vako paw vabereki uye nesu nekupindura pazasi!
chii chinonzi chokoreti lab
mukurumbira wechikadzi german mufudzi mazita
kune madiki madiki bulldogs
ko pomchi yakaita sei
mazita akanaka embwa huru